CL: Kooxda Monaco oo u soo baxday siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub markii ay reebtay Manchester City… + SAWIRRO - Gool FM	twitter
Inta aan la aadin qeybta nasashada Man City ayaa laga dhaliyey goolka labaad waxaana 29’daqiiqo ugu shubay Fabinho, kaddib markii uu kubbad joog hoose ku socotay garab ka keenay Benjamin Mendy, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-0 ay ku gacan sarreysay Monaco.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa dhalisay gool rajo wayn geliyey oo ay ku soo bixi kartay, waxaana u saxiixay 71’daqiiqo Leroy Sane, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu goolhayaha Monaco ka tufay Raheem Sterling, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 ay wali ku gacan sarreysay kooxda martida loo ahaa ee Monaco.
Laakiin kooxda Monaco ayaa la timid gool kale kaasoo rajo beel ku riday Man City waxaana laad xor ah oo la soo karoosay 77’daqiiqo madax ku dhaliyey Tiemoue Bakayoko, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 looga adkaaday wiilasha tababare Guardiola.
Manchester City iyo Monaco goolashooda labada lugood ayaa noqday wadar ahaan 6-6, laakiin kooxda reer France ayaa 3 gool ku soo dhalisay garoonka Etihad lugtii hore taas ayaana ka caawisay inay u soo baxaan siddeed dhammaadka koobka horyallada Yurub ee Champions League.
Man City ayaa sidaas uga hartay tartanka Champions League, kooxda Ingiriiska ku matali doonta tartankan ayaana ah kaliya Liecester City.